Xildhibaano si kulul uga hadlay go’aanka Kenya iyo Xiisada Siyaasadeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xildhibaano si kulul uga hadlay go’aanka Kenya iyo Xiisada Siyaasadeed
Xildhibaan Cabdirisaaq Maxamed Cumar, oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa Go’aanka ay gaaratay dowladda Kenya u yahay mid ay ku dooneyso in dowladda Federaalka ay si hoose ugala xaajooto badda ay milkayaddeeda sheeganeyso ee ay Soomaaliya ku haysato.
Qoraal uu soo dhigay Bartiisa twitter-ka ayuu ku sheegay in sidookale Kenya ay raja ka qaboinay saameyn ku yeelato natiijada kasoo baxda dacwada dhinaca Badda ah ee u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya ee taallaMaxkamada Cadaaladda Aduunka ee ICJ.
Dhinaca kale Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo isna ka hadlayay Go’aanka Kenya ayaa sheegay in Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya looga baahan yahay inaysan ku qasbanaan in Go’aankav Kenya aawgiis ay gorgortan kala galaan taako ka mid ah Soomaaliya.
Waxa uu Dowladda Kenya ka dalbaday Xildhibaankla anay isxtiraamto madax-banaanida Soomaaliya,sidookalena ay dhawrto nabad ku wada noolaanshiyaha gobolka Geeska Afrika.
Si kastaba dowladda FederaalkaSoomaaliya ayaa saacadaha soo socda lafilayaa inay ar rasmi ah kasoo aarto go’aanka kasoo baxay Kenya kaas oo abuuray khilaaf soo kala dhexgalay Kenya iyo Soomaaliya.